I-Wombarra Ocean Retreat - I-Airbnb
I-Wombarra Ocean Retreat
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguGary
Iflethi okanye indlu yethu ekwicomplex enamagumbi okulala ayi-1 inendawo entle yokubuka ulwandle nenendawo entle engaselwandle. Iflethi okanye indlu ekwicomplex iyadibana nekhaya lethu kodwa inendlela eyahlukileyo yokungena yabucala.
Iiyure eziyi-1.5 ukusuka eSydney ngemoto okanye ngetreyini iWombarra yilali engaselwandle ethe cwaka enikezela kokubini ngaphandle kunye nendawo ethe cwaka.
I-Covid-19: Siza kugcina iindawo eziphakamileyo phakathi kokubhukisha size sazise ngamanyathelo ongezelelekileyo okunciphisa iintsholongwane. Oku kunokubangela ukuba kungabikho mntu ubhukishileyo ibe siyaxolisa ngako nakuphi na ukuphazamiseka okubangelwe yile nto.
Iflethi inezixhobo zasekhitshini ezipheleleyo (ukupheka okuphathekayo, ioveni, ifriji, iimbiza/iipani/i-crockery/iiglasi njl), i-wifi yasimahla, i-Apple-TV/Netflix/Stan njl njl. Indawo yokupaka imoto esesitratweni enye efumanekayo (indlela yokungena enyukayo ayizifanelanga iimoto eziphantsi).
Iflethi ngumgangatho omnye ukusuka kwinqanaba lokungena kwaye yahlukaniswe kakuhle kuyo yonke indlu ibe iyimfihlo.
Sifake iflethi okanye indlu ekwicomplex kuAirbnb emva kwezicelo ezivela kwiindwendwe zaphesheya zeflethi okanye indlu ekwicomplex yethu yaseSydney ukuze wonwabele izinto ezinokonwatyelwa "ngaphandle kweSydney". Njengoko abantwana bethu besasaza ihlabathi lonke kwaye singabatyeleli abangathathi ntweni, siyakuvuyela ukunikezela ngeflethi okanye indlu ekwicomplex kwiindwendwe ze-Airbnb ezineenkcukacha eziqinisekiswe ngokupheleleyo.
Indawo yokuhlala inokwahlulwa ekhitshini ngokuvala izikrini zeSuji (jonga iifoto) kunye neAerobed ephindwe kabini enikezela ngezinto zokondlula ibhedi ezongezelelekileyo (nezintofontofo).
Olu khetho lusenokusebenza kuphela kwiindwendwe ezifuna iibhedi ezahlukileyo njengoko injongo yethu inomda weendwendwe ezi-2 kuphela (nangona siza kuqwalasela iimeko ongenakuzinceda).
4.95 · Izimvo eziyi-193
Indawo engummelwane likhaya leengcali ezahlukahlukeneyo, iingcali, abantu abathengisayo, abalingiswa, abafundi, abantu abathandanayo, abathandanayo, abathandanayo, abathandanayo, abanobubele, abaphinda bayibize - uyithiya igama, sinayo.
Le yinto eyenza iWombarra ibe yindawo esiyithandayo.
We both enjoy traveling and have had plenty of adventures in Europe, North Am…
Siza kuhlonipha izinto eziyimfihlo zeendwendwe zethu size silindele okufanayo nawe. Ekubeni sithe siyakuvuyela ukunikezela ngenkcazelo eninzi size sincede kangangoko sinako.
Kufuneka usoloko uziva ukhululekile ukucofa emnyango wethu okanye usifowunele ukuba kukho into oyifunayo.
Siza kuhlonipha izinto eziyimfihlo zeendwendwe zethu size silindele okufanayo nawe. Ekubeni sithe siyakuvuyela ukunikezela ngenkcazelo eninzi size sincede kangangoko sinako.…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-6364
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wombarra